I-wardrobe ye-ofisi egqibeleleyo ikuvumela ukuba wenze umfanekiso ochanekileyo emehlweni abo baphakamileyo, abathengi, oogxa okanye abaphantsi, ukufumana uphuhliso okanye inkontileka enenzuzo. Ngaba siyazama ukufunda izinto ezisisiseko? Ngoko, wena ...
Isiseko se-wardrobe yeshishini
... umqeshwa wolawulo oluphakathi kwinkampani, apho kungekho mida eqinile. Ufuna ukuphuma kwisihlwele seofisi, kodwa gcina i-laconism ecacileyo. Okukhethiweyo: I-Smart yezinto eziqhelekileyo-ishishini, kodwa isitayela eshukumisayo, evumela ukunyaniseka kwefestile. Kuphi okubandakanya: izinto eziphambili ze-laconic, ezizaliswe zixhobo eziqhakazileyo okanye izicathulo. Izambatho zakho aziyi kubukeka ziqatha, ukuba udibanisa imibala enokuthula ngemibala enamanzi okanye i-pastel, faka ezinye izicatshulwa kunye nokuhlobisa okungaqhelekiyo (ukusika okungaqhelekanga, iintlobo kunye nemida). Uhlobo oluthile lwefestile: ufuna ukujonga ubuchwepheshe? Yenza i-jeans ngeebool, i-trousers encinci kwaye ugcine izicathulo ezitshintshileyo kwidilesi yedeski yakho. IiJeans kunye neebhotile akuyona nto ingcono kwi-business ensemble.
I-Smart casual - ibe nesibindi nesicatshulwa
... bexhamla kwaye bafuna ukuphawula. Kwinkampani yakho, kukho iimfuno eziqhelekileyo zokubonakala, kodwa ngaphandle kwemimiselo engqongqo. Okukhethileyo: Ibhizinisi - isiteti esicacileyo esigxininisa ibhishini lakho liyafaneleka. Yintoni equlethe: iifesti kunye neengubo zeesketi, izikhwama. Zifanele zifakwe kulo mzobo kwaye zitshintshwe kwizinto ezisemgangathweni. Yongeza isambatho ngewashi enhle, isikhwama sesimo esingavamile, izicathulo zomzekelo ezenziwe ngesikhumba sembala.
Ibhizinisi eligqibeleleyo: Iifoto ezingenakwenzeka
... unesimo esinzulu okanye esiphezulu (sebenza wena) kwaye ufuna ukuqinisa igama lakho. Okukhethiweyo: Ibhizinisi eliqhelekileyo liyindlela engabonakaliyo ebonisa ubunzima bakho kwindawo yoshishini. Yintoni equkwayo: ezivela kwizinto ezifanayo ezenza ishicilelo seShishini, kodwa nangaphezulu. Musa ukukhangela izitya ezibizayo, izikhwama kunye neengubo ezilungele ngokupheleleyo kuwe - umfanekiso wakho emehlweni abanye uza kukuzisa igalelo ezimnandi.
IShishini eliMiselweyo: Ngokukhawuleza, kodwa ngokuphumelelayo
Ekuphakameni: iindlela ezintathu zokuhlala zikhangelekile
Iimpawu zokubethelela iinwele zabasetyhini, i-Spring-Summer 2016
Sihlaziya i-wardrobe: I-TOP-3 imifashini ye-fashion-2017
Iinqanawa eziqhelekileyo zasebusika zabasetyhini
Ukwamkela iRoyal: indlela yaseMpumalanga - umthamo wekwindla-2016
Iimfashiselo zeNew New Year's Best
Amajelo ashicilelwe ukuba uMash konchalovskaya ushiye i-coma
Kutheni kungekhona ukuphefumula omtsha
Iimeko zobomi - imeko yomzali
Ngaba kuncedo ukulala ngaphandle kweengubo?
Iphareji yebhali kwi-multivark
Izityalo ezingaphandle: i-fittonia
I-Helminthiasis kunye neprophylaxis yayo kubantwana
Amapheya kunye noshizi
Indlela yokwenza i-manicure ne shellac ekhaya?
Ubudlelwane bomphathi kunye nabangaphantsi
I-chocolate pie ne-cowberry
Isobho se-bean puree
Indlela yokufaka isiseko: imfundo elula evela kubaculi bezenziwe!
I-Cosmetology ekhaya: sebenzisa i-vitamin E
Kissel kwi sorrel